गरिब परिवारलाई नमूना घर « Loktantrapost
गरिब परिवारलाई नमूना घर
२ मंसिर २०७६, सोमबार २०:५५
धुलाबारी । प्रदेश नं. १ सरकारको जनता आवास कार्यक्रम मेचीनगरमा सुरु भएको छ । सरकारले सूचीकृत गरेका जातिहरुमा पर्ने दलित, अल्पसङ्ख्यक लोपोन्मुख मध्येबाट पनि गरिब परिवारलाई घर बनाइदिएर हस्तान्तरण गर्ने अभियान सुरु भएको प्रदेश सभा सदस्य गोपालचन्द्र बुढाथोकीले जानकारी दिए ।
जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत झापा क्षेत्र नं १ मा ५५ वटा घर गरिब परिवारले पाउने भएका छन् । यसै आर्थिक वर्षभित्र घर निर्माण गरी सम्बन्धित परिवारलाई हस्तान्तरण गर्ने योजना सुरु भएको हो ।
झापा क्षेत्र नंं १ अन्तर्गत मेचीनगर ३, ७, ९, ११, १३ र १५ नम्बर वडाका ३३ जना गरिब परिवारको घर बन्नेछ । यस्तै, बुद्धशान्ति गाउँपालिकाको ४, ६ र ७ वडामा १६ जनाको र भद्रपुर नगरपालिकाको ९ र १० वडामा ६ वटा घर बनाएर हस्तान्तरण गरिनेछ ।
निर्माणाधीन एउटा घरको लागत ३ लाख ३२ हजार रुपैयाँ रहने सहरी विकास डिभिजन कार्यालय इलामका ओभरसियर प्रज्वल साहले बताए । उनले सरकारले उपलब्ध गराएको बजेट र स्टिमेट अनुसारको नमूना घर निर्माण गरिनेछ । उक्त रकम प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । १० बाई ११ क्षेत्रफलमा बन्ने नयाँ घरमा दुईवटा कोठा र पाँच फुटको बरन्डा हुनेछ । घरमा टिनको छाना लगाइनेछ ।
सोमबार मेचीनगर–११ स्थित गोजाबस्ती निवासी ढाक्रु मुसहरको घर शिलान्यास गरेर जनता आवास कार्यक्रम सुरु गरिएको छ । घरको शिलान्यास झापा क्षेत्र नं. १ का सङ्घीय सांसद राम कार्की, प्रदेश सभा सदस्य गोपाल बुढाथोकी, श्रीप्रसाद मैनाली, मेचीनगर उपप्रमुख मीना उप्रेतीले संयुक्त रुपमा उद्घाटन गरेका थिए ।
घर शिलान्यासपछि आयोजित कार्यक्रममा सङ्घीय सांसद राम कार्कीले कम्युनिस्ट सरकारले जे बोल्छ, त्यो काम गरेर देखाउने बताए । उनले घर बनाउन नसक्ने जनतालाई घर बनाइदिएर अभियान सुरुवात भएको बताए । प्रदेश सभा सदस्य गोपाल बुढाथोकीले गरिब जनताको पक्षमा सरकार सधैँ साथमा रहेको बताए ।
शिलान्यास कार्यक्रममा प्रदेश सभा सदस्य श्रीप्रसाद मैनाली, ११ नम्बरका वडाध्यक्ष सन्तोष मेचे, ६ नम्बर वडाका जनप्रतिनिधिहरु राजकुमार श्रेष्ठ, सावित्रा ल्वागुन, लक्ष्मी तामाङ, नेकपा मेचीनगर अध्यक्ष माधव अर्याल, सचिव खेमराज पोखरेल, नेकपाका नेताहरु प्रकाश भण्डारी, अर्जुन पौडेल, डिल्लीराम घिमिरे, रेणुका डाँगी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रमको सञ्चालन रुद्र डाँगीले गरेका थिए ।